Sifuna abantu abaneziqu, nabakwazi ukuphatha kwa-SABC: ANC – LIVE Express
Sifuna abantu abaneziqu, nabakwazi ukuphatha kwa-SABC: ANC
Iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), selizwakalise ukungenami ngezinga lokusebenza ehlanganweni yezokusakaza kuleli, i-South African Broadcasting Corporation (SABC).
Kusanda kusuka umsindo ngenkathi u-Motsoeneng ememezela ukuthi u-SABC awusezukuyisakaza imibhikisho enezigameko zodlame kanye nokucekelwa phansi kwempahla kanti i-ANC ithi ayeneme neze ngalokhu yathi futhi akukaze kuxhunyanwe nayo njengeqembu elibusayo kanjalo nomphakathi.
uSihlalo wekomidi lezokuxhumana kwi-ANC, u-Jackson Mthembu, uthi izinkinga eziningi ezikhungethe u-SABC ziwubufakazi bokungabikhona kobuholi obuqotho kuyo i-SABC.
Uthi ngesonto eledlule bekufanele kudlale isikhangiso se-ANC sokhetho mhla zingama-27 June 2016 kodwa size sadlalwa sekudlule izinsuku ezinhlanu.
”Nathi siyizisulu zesiko elimbi lokusebenza e-SABC. Futhi yileli siko okumele sonke siliqede,” kubeka uMthembu.
uMthembu wengeze nangokuthi izikhala ezisezikhundleni eziphezulu e-SABC kanye nokugqigqa izinkantolo kwa-Motsoeneng yikhona okwenza ukuthi i-SABC ingaphathwa ngendlela efanele.
“Sifuna abantu abaneziqu ukuthi bahole i-SABC. Yindlela leyo esinomona ngayo. Sesikusho lokhu izikhathi eziningi. Kubo bonke ongqongqoshe ababeqokelwe kulesi sikhundla, ongqonqoshe bezokuxhumana.
“Sathi kubona kumele niqinisekise ukuthi sinabantu abakwaziyo ukuthi siphathwa kanjani isikhungo esikhulu njenge-SABC, ezingeni eliphezulu. Awukwazi ukuvele ulethe noma ngubani ukuthi aphathe isikhungo esikhulu kanje,” kuqhuba uMthembu.
Inkulumo kaMthembu ibukeka ibheke ngqo kwi-COO ye-SABC, u-Motsoeneng, njengoba engenalo ibanga leshumi nambili (grade 12) yize noma eqhoqhobele isikhundla esiphezulu.
Kodwa-ke uMotsoeneng uyaye azivikele kulokhu ngelokuthi usesebenze iminyaka eminingi kwa-SABC kusukela eseyintatheli ngakho usenolwazi oludingekayo ukuqhoqhobala isikhundla sokuba yi-COO.
Uboshiwe odlwengule, wathumba izingane ezintathu
BUKA: U-Andile Jali ehlonywa imibuzo ngesiNgisi eziphendulela ngolwebele eBelgium